Ihowuliseyili Express Umenzi kunye noMthengisi | Ngexesha
Ukucaciswa kwamanye amazwe yenye yezona zinto zibalulekileyo kurhwebo lwamanye amazwe. Uninzi lwe-eBay / AliExpress / umthengisi waseShopiy ukuhambisa iimveliso zabo kulo naliphi na ilizwe. Uluhlu olukhulu lweenkonzo ...
Ukucaciswa kwamanye amazwe yenye yezona zinto zibalulekileyo kurhwebo lwamanye amazwe. Uninzi lwe-eBay / AliExpress / umthengisi waseShopiy ukuhambisa iimveliso zabo kulo naliphi na ilizwe. Uluhlu olukhulu lweenkonzo eziphakanyiswe nguGuangzhou Ontime zikunika uninzi lwezinto onokukhetha kuzo ukuhambisa iimpahla zothutho lwakho. Ngaphandle komoya kunye nolwandle uthutho, inkonzo yothutho ebonakalayo yenziwa ukuphendula kulindelo lwakho kunye neemfuno ngokukhawuleza. Inkonzo yokucacisa inikezela ngokukhawuleza nangendlela efanelekileyo yokuhamba phakathi kwe China kunye nelizwe elikhethiweyo. Ikhuriya, ekwabizwa ngokuba «ukuhanjiswa okucacileyo», ibonisa «umnyango nomnyango» apho inkampani yokuhambisa izakususa iimpahla zakho kwidilesi ekuvunyelwene ngayo (ngesiqhelo umthengisi wakho okanye umhlanganisi kwilizwe lakho lokuzalwa) kwaye uya kuzisa ukuthunyelwa kwakho kwidilesi yokuhambisa (kwindawo ohlala kuyo okanye kwidilesi yomthengi umzekelo).
Njengenxalenye yokuhanjiswa, amaqela aphetheyo asingatha onke amanyathelo afunekayo okhenketho lweempahla ukusuka kwindawo A ukuya kwindawo B, eyile: ukususwa, ukuthuthwa / ukuthuthwa kwempahla, ukucocwa kwamasiko kwindawo yokuqala nendawo ekuyiwa kuyo, intlawulo kunye imisebenzi yempahla kodwa nayo yonke imisebenzi yolawulo efunekayo. Enkosi kubudlelwane obuqinileyo kunye nentsebenziswano egcinwe kunye neenkampani ezibaluleke kakhulu zokuhambisa (i-DHL, i-FedEx, i-UPS kunye ne-TNT),Ixesha lexesha laseGuangzhou iqinisekisa utyelelo olukhawulezileyo noluthembekileyo "lwendlu ngendlu" phakathi kwe China nelizwe elikhethiweyo. Xa uhambisa ngenqanawa nge-GZ yeXesha lokuSebenza-uyathumela kunye neengcali kuthumelo lwamanye amazwe kunye neenkonzo zokuhanjiswa kwekhuriya! Ngoluhlu lwethu olubanzi lweepasile kunye neenkonzo zephakheji, kunye nokuthumela kunye nezisombululo zokulandela umkhondo ukuze zilungele iimfuno zakho-funda ngendlela ye-GZ Ontime enokuhambisa ngayo!
1. I-DHL yasekwa ngonyaka we-1969, ngoku i-DHL yinkampani ehamba phambili yokuhanjiswa kwezinto. I-DHL liqela lehlabathi elinama-380,000 eengcali zokuhambisa, ezimanyene ngumnqweno wezinto zokusebenza. Kwaye i-DHL isebenza kwindawo eyodwa. I-DHL iyinto entsha njengokuqala, ngamandla ombutho wamanye amazwe. I-DHL iya kubonelela ngeyona nkonzo ihamba phambili yokuhambisa, kwaye ikwanabo nobuchule obunamandla bokucoca amasiko. Iya kuba yeyona ikhawulezayo, iindleko kuphela iintsuku zokusebenza ezi-3 ~ 5.
2. I-FedEx / TNT FedEx Express igubungela zonke iidilesi zezitalato zase-US kunye neenkonzo ezingaphezu kwamazwe angama-220 kunye nemimandla. Uthungelwano lwethu lwehlabathi lubonelela ngexesha elinovakalelo, ngenkonzo yomoya yomoya ngokubonisa ngaphezulu kweenqwelo moya ezingama-650 kwihlabathi liphela.
3. IUPS Umthengi kuqala. Abantu beLed. Ubuchule obuqhutywa. Ibali le-UPS, eyona nkampani inkulu yokuhambisa iphakheji, yaqala ngaphezulu kwenkulungwane eyadlulayo ngemali mboleko eyi- $ 100 yokuqalisa inkonzo encinci yomthunywa. Siguquke njani saba ngumbutho wezigidi-gidi wequmrhu lomhlaba jikelele obonisa imbali yezothutho lwanamhlanje, urhwebo lwamanye amazwe, ukuhanjiswa kunye neenkonzo zezemali. Namhlanje, i-UPS ngumthengi kuqala, kukhokelwa ngabantu, kuqhutywa izinto ezintsha. Inikwe amandla ngabasebenzi abangaphezu kwama-495,000 abadibanisa ngaphezu kwama-220 amazwe kunye nemimandla yendlela, iileyili, umoya kunye nolwandle. Ngomso, i-UPS iya kuqhubeka ukukhokela ishishini kunye nokudibanisa umhlaba, ngokuzibophelela kwinkonzo esemgangathweni kunye nokugcinwa kwendalo.
4. I-Aramex i-Aramex ikhule ngokukhawuleza yenziwa uphawu lwehlabathi, eyaziwayo ngenxa yeenkonzo zayo ezizenzekelayo kunye neemveliso ezintsha. Uluhlu oludweliswe kwiNtengiso yezeMali yaseDubai (i-DFM) kwaye esekwe kwi-UAE, iAramex ikumbindi weendlela phakathi kweMpuma neNtshona, esivumela ukuba sinike izisombululo ezilungiselelwe wena naphina emhlabeni ngokufezekileyo kwaye sifikelele kumashishini nakubathengi bengingqi nakwilizwe jikelele. Sizimisele ukuqhubeka nokwandisa imisebenzi yethu kulo mmandla wonke ngelixa siqhuba amathuba okukhula kweshishini kwiimarike ezisakhasayo phesheya. Le ndlela ingundoqo kuphuhliso oluzinzileyo lweshishini lethu kunye nokuzinikela ekuququzeleleni urhwebo olubanzi, lwehlabathi kwihlabathi eliguqukayo.
5. Umgca ozinikeleyo. Ngaphezulu kwako konke, sikwabonelele ngexabiso elingcono kakhulu kwinkonzo yendlu ngendlu. Ngokusebenzisana no-Hongkong oomatshini bokugcina inqwelomoya abazinzileyo kunye nabakhokeli behlabathi abahamba phambili kumazwe aseYurophu nase-US, i-GZ ye-Ontime Direct Line yindibaniselwano yokudibanisa kunye nenkonzo yeposi kwi-DDP (Bhengeza umsebenzi ohlawulelweyo). Sisebenzisa inqwelomoya ethe ngqo ukusuka eHongkong ukuya kwisango lokufika yonke imihla kwaye sibamba kwangolo suku kususwe isiko. Yi-100% yolawulo olupheleleyo kuthutho lomoya kwaye ukuhanjiswa kweemayile zokugqibela kuyafumaneka isisombululo sezoqoqosho ngokuhanjiswa okukhawulezileyo okuyilo ikakhulu loyilo lweephakeji zorhwebo.Kodwa ayigubungeli umhlaba wonke. Ikowuteshini ngokwesiqhelo iya kuba yi-5 ~ 7USD / KG kuphela. Ngeli xesha, sinayo le nkonzo ikhethekileyo eMalaysia, e-USA, eYurophu. Kodwa ukuba ufuna iinkcukacha ezithe kratya malunga nayo, nceda unxibelelane nam, ukuze sikwazi ukubonelela ngenkonzo efanelekileyo kuwe.
Egqithileyo Isidima somsebenzisi olungileyo sokuDlulisa ngokukhawuleza eShanghai e-UK e-Thailand i-DHL yeeNdleko zeNdleko amaxabiso aphantsi kwiNdleko yokuThuthwa kweMithwalo yoMoya e-China e-Europe
Okulandelayo: Ixabiso eliphantsi le-2019 i-Express (DHL UPS FedEx TNT) yokuhambisa ngenqanawa ukusuka e-China ukuya kwa-Israyeli